Taageerda xisbiyada S iyo MP oo hoos u dhacaysa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Taageerda xisbiyada S iyo MP oo hoos u dhacaysa
La daabacay tisdag 22 december 2015 kl 16.23
Stefan Löfven íyo Åsa Romson. Sawirle: Christine Olsson/TT samt Fredrik Sandberg/TT.
Xisbiyada ku bahoobay maamulka dalka ee Miljöpartiet iyo Socialdemokraterna ayey taageerada ay bulshadu u heeyso hoos u sii dhacaysaa, middaasina oo gaartay saqafkii ugu hooseeyay sida ku cad baaritaan ay shirkadda Novus u sameeysay laanta wararka idaacadda raadiyaha Sweden ee Ekot.
Halka dhanka kale uu baaritaankaasi ka muuqday in taageerada loo hayo xisbiga Sverigedemokraterna uu ku helay taageeradiisii ugu badnayd.
Tommy Möller, ahna caalin ku takhasusay culuunta hoggaanka dawlad-nimo, kana howl-gala jaamicadda Stockholm ayaa sheegay in taageerda kor u kaceeysa ee xisbiga SD ay ugu wacnaan karto arrimmaha siyaasadda soo galootiga ee waayadan dambe ey dooduhu ka socdeen,.
– Su’aasha soo galootiga oo muddooyinkan dambe laga doodayey ahna mid uu xisbiga SD jeebka ku sito ama iska leeyahay ayaa ugu wacnaan karta kor u kaca taageerada xisbiga, sida uu hadalka u dhigay.
Xisbiga SD ayaa baaritaankan lagu sheegay inuu nasiib u yeeshay taageradii ugu ballaarnayd, middaasina oo gaarsii-san 20%, iyadoona uu xisbigu iminka u muuqdo inuu ka mid noqday xisbiyada ugu waaweyn ee siyaasadda dalka.
Caalinka Tommy Möller ayaa aamin-san hoos u dhaca taageerada ee xisbiyada ku bahoobey awoodda dalka ey ugu wacan tahay togtognaanta dawladdu aanay si karti leh uga go’aan qaadan siyaasadda soo galootiga iyo weliba aqlabiyad darrida uu garabka casaan cagaarku ku leeyahay xubnaha baarlamanka.
– Dawlad tabar yar ayaa dalka ka talisa, middaasina oo lagu macneeyn karo hoos u dhaca taageerada. Waxaana dhici karta in dawladdani tahay middii ugu laciifsanayd ee taariikhda cusub ee siyaasadda Sweden. Taageero-darrida baarlamanka ka hayasta iyo siyaasadda kala duwan ee xisbiyada dawladda ku bahoobey, sida uu sheegay Tommy Möller.